Madagascar – Fanadiovana eo anivon’ny fitsarana – Am-polony ireo mpitsara, mpiraki-draharaha ary mpandraharahan’ny fonja vosazy mafy – Ao raha du 16 janvier 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgacheMadagascar - Fanadiovana eo anivon'ny fitsarana - Am-polony ireo...
Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgacheNEXTHOPERANARISON Tsilavo
Madagascar – Fanadiovana eo anivon’ny fitsarana – Am-polony ireo mpitsara, mpiraki-draharaha ary mpandraharahan’ny fonja vosazy mafy – Ao raha du 16 janvier 2019
Nitsoka mafy ny rivotry ny fanadiovana ny asan’ny Fitsarana tamin’iny taona 2018 iny.Araka ny tatitra nataon’ny minisitry ny Fitsarana, Noro Vololona Harimisa, omaly, diampitsara folo no nampiakarina Filankevipifehezana tamin’ny taon-dasa. Tsy afa-bela ireoolon’ny Fitsarana hafa, toy ny mpiraki draharaha sy mpandraharahan’ny fonja. »Ny valo tamin’ireo mpitsara no efa voatsara. Ny iray noafahana satria tsy nanaofahadisoana. Ny roa tamin ‘ireo mpitsara kosa mbola nahemotra amin’ny fotoana manarakany fiakaran’izy ireo Filankevi-pifehezana », hoy izy taorian’ny fanokafana tamin’ny fombaôfisialy ny fotoam-pitsarana, amin’ity taona 2019, ity tetsy Anosy.Ankoatra izay, mpirakidraharaha telo no niakatra Filankevi- pifchczana, tamin’inytaon-dasa iny ihany. Voasazy avokoa izy ireo, raha ny fanampim-panazavana noentin’nyminisitra mitana ny fitombo kasem-panjakana. Nanaitra kosa ny fanambaràna nataon’nyminisitra tarnin’ny fepetra noraisina rnomba an’ireo mpandraha rahan’ny fonja.Miisa teloamby roapolo ireo mpandraharahan’ny fonja niakatra Filankevi-pifehezana ary maro tamin’izyireo no noesorina teo amin’ny toerany noho ny heloka sy ny fandikan-dalàna nataony. Mbold misy ireo raharaha samihafa tsy nandalo tao amin’ny Filankevitra kahiandrasana fotoana hafa », hoy hatrany ny minisilry ny Fitsarana. lsan’izany ny momba nvraharaha mikasika ilay mpitsara Fanirisoa Ernaivo, izay notorian’ny fianakaviamben’nyPôlisim-pircnena noho ny fa nambaràna nataony, tetsy Mahamasina.Ady amin’ny kolikolyNandrity ny tafatafa nataony tamin’ny mpanao gazety, omaly , dia nanararaotra nanaotatitra fohy momba ny fanatanterahana an’ireo fanamby napetrany taorian’ ny fito volananitantanany an’ity minisitera ity I Noro Vololona Harimisa. lsan’ny asa lehibe nimatimatesanyny momba ny ady amin ny kolikoly izay nandraisany fepetra hentitra.Teo ny fanafoaNana ny fanadinam-panjakana tao amin’ny Sekolim-pirencnafanofanana mpitsara sy mpiraki-draharaha. Nambarany fa tokony hojerena ny fepetramanokana horaisina mba hampangarahara ny fanatanterahana an ‘io fanadinam-panjakana io.Eo, ohatra, ny fikirakirana ara-teknika ny solosaina ho ampiasana amin’izany. « Betsaka nyzavabita tao anatin’izay fotoana fohy nitantanana ny minisitera izay, toy ny fametrahana ireofitsipika tokony ho arahina. Ohatra ihany koa ny fanajana ny fotoana tokony hidirana miasa.Teo indray ny fananganana fotodrafitrasa samihafa ary ny fanatsarana ny sakafon ‘ireovoafonja » hoy hatrany ny minisitra Noro Vololona Harimisa .Juliano Randrianja
Previous articleMadagascar – Le consul d’Australie kidnappé à Antsiranana – Expressmada du 16 janvier 2019
Next articleMadagascar, fihoaram-pefy, tsy fanarahan-dalàna – Mpitsara fito, greffiers telo nandraisana fepetra nosaziana – Taratra 16 janvier 2019